Wararka - Xiriirka shabakadda gaarka loo leeyahay ee COVID-19
2020 waxay noqon doontaa sanad aan caadi ahayn, COVID-19 ayaa adduunka oo dhan xaaqay waxayna keentay masiibo aan horay loo arag bini-aadamka oo saameyn ku leh qof walba oo adduunka ah. Ilaa 09th Jul, in ka badan 12.12 m kiisas ayaa laga xaqiijiyay adduunka oo dhan, tirakoobkuna wuxuu muujinayaa inuu wali sii kordhayo. Waqtigan ugu adag, Kingtone wuxuu had iyo jeer isku dayayaa sida ugu fiican ee aan ugu guuleysan lahayn dagaalka aan kula jirno COVID-19 adoo ka faa'iideysanaya khibradeena.
Waqtigan adag, ha ahaato xakamaynta baaxadda weyn, qoondaynta hay'adaha caafimaadka degdegga ah, iyo qaybinta, ama shaqaalaha daryeelka caafimaadku waxay ku daaweeyaan bukaanka infekshinka goobta shaqada ama cadaadiska ka imanaya siyaasadda bandowga, dhammaantood waxay dalabyo sare saaraan isgaarsiin wax ku ool ah. Sida loola xiriiro masaafo aamin ah, oo si wax ku ool ah oo nidaamsan loogu shaqeeyo jawi qalafsan, waa muhiim iyo sidoo kale tijaabin caan ah oo ku saabsan isgaarsiinta xaaladaha degdegga ah.
Sababtoo ah shabakada gaarka loo leeyahay waxay ku shaqeysaa kooxda gaarka loo leeyahay, waxaa jira faa iidooyin badan marka loo eego shabakada bulshada inta lagu jiro waqtigan adag.
1. Nidaamku waa ka aamin iyo aamin badan yahay;
2. Wicitaan kooxeed, wicitaan mudnaan leh iyo astaamo kale iyo faa iidada shabakada gaarka loo leeyahay waxay buuxinayaan amarka saxda ah iyo jadwalka jadwalka;
3. Isla mar ahaantaana jadwalka jadwalka, nidaamka shabakada gaarka loo leeyahay ayaa sidoo kale gudbin kara sawirada, fiidiyowyada, goobaha, iyo macluumaadka degdega ah.
Dagaalkii ka dhanka ahaa COVID-19, xiriirka isgaarsiinta gaarka loo leeyahay wuxuu noqdey taageero muhiim u ah la dagaalanka COVID-19.
Xarumo badan oo caafimaad ayaa ku tiirsan nidaamka raadiyeyaasha-Walkie-talkie si loo wanaajiyo wada xiriirka shaqaalaha inta lagu gudajiro COVID-19. Markaad la macaamilayso nolosha qof, ama caafimaadkiisa, wada xiriirka ayaa ah waxa ugu muhiimsan. Wax ku ool ah isgaarsiinta waxay ka caawin kartaa shaqaalaha daryeelka caafimaadka inay horumariyaan shaqadooda.
Vicky Watson, agaasimaha kalkaaliyayaasha caafimaadka, ayaa sheegtay in Walkie talkie ay ka caawineyso inay horumariso hufnaanta shaqada. Sanado badan, waxaan ku luminay waqti aan ku dadaalno inaan helno asxaabteena, laakiin Walkie talkie waa mid aad u weyn oo uma baahnin inaan ku ordo si aan qof u helno. Walkie talkie-na way ka qaalisan tahay qalabka kale ee isgaarsiinta. Waxaan kaliya u baahanahay inaan riixno badhan; markaa waan wada hadli karnaa. ” Waxaa jira kiisas badan oo muujinaya sida isgaarsiinta deg-degtu u shaqeyso.
Xalka Kingtone ERRCS (Nidaamka Wadahadalka Jawaabta Raadinta Degdega ah) xalku wuxuu mideeyaa xalal kaladuwan oo isgaarsiineed. Xalka Kingtone ERRCS wuxuu ujeedkiisu yahay inuu abuuro amarka xaaladaha degdegga ah iyo ka-baaraandegidda macluumaadka ee macaamiisha, taas oo aan ku tiirsaneyn shabakadda dadweynaha, caymiska masaafada dheer (illaa 20km), waxayna ku siin kartaa kormeer, digniin ka hor, iyo gargaar samatabbixin iyadoo la adeegsanayo horumarsan teknoolojiyada.
Hadda, xaaladdu way soo fiicnaaneysaa maalinba maalinta ka dambeysa, taas oo aan laga sooci karin naf-hurnimada shaqaalaha caafimaadka, shaqaalaha dawladda, iyo mutadawiciinta safka hore ah, iwm. Gadaashiisa, sidoo kale waa mid aan laga maarmi karin taageerada xooggan ee xiriirka isgaarsiinta gaarka loo leeyahay. shirkadaha dhanka isgaarsiinta shabakadda. Cudurka faafa ee adduunka ma dhammaado; hawshu wali way dhib badan tahay. Macno malahan goorta iyo goobta, waxaa la rumeysan yahay in Kingtone uu had iyo jeer dabooli doono baahida ka hortagga iyo xakameynta cudurrada faafa, isla markaana aan ku dadaali doonno sidii aan uga caawin lahayn dagaalkan faafa.